May 26, 2020 Mahad Jama 38
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu sii xoogaysanayey khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa maamulka Somaliland uu waday maalmihii ugu dambeeyey qorshe ka dhan ah Puntland.
Xoggo hoose oo Puntlandtimes ay ka heshay qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Somaliland ayaa tibaaxaya in Somaliland ay qorshaysay duulaan ka dhan ah Puntland, kaas oo ay ku doonayso in ay ku qabsato deegaano hor leh.
Deegaanada Somaliland higsanayso qabsashadeeda ayaa waxaa kamid ah deegaanada Faliidh Yaale iyo God Qaboobe oo ka tirsan gobolka Sool, kuwaas oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamo badan oo kasoo jeeda gobolka Sool hasa yeeshee haatan qayb ka ah xiisada Denni iyo Karaash.
Arintani ayaa timid kadib markii ciidamadii ku sugnaa deegaanadaasi ay u jihaysteen dhanka duleedka Garowe, kuwaas oo taabacay madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Ka bixitaankooda deegaanada Faliidh Yaale iyo God Qaboobe ciidamada la saftay Axmed ayaa Somaliland u aragtaan haatan fursad weyn, waxaana deegaanadaasi ay kusii daabulaysaa ciidamo fara badan si ay u gaadhaan una xaqiijiyaan qabsashadooda.
Ciidamadii hore ugu sugnaa deegaanada Faliidh Yaale iyo God Qaboobe ee Puntland ayaa haatan dul fadhiya magaalada Garowe, waxaana qaarkood ay saldhigyo ciidan ka samaysteen deegaanka Bixin oo dhaca waqooyiga magaalada Garowe halka madaxweyne Denni iyo Axmed Karaash uu haatan mid walbaaba qorshaynayo duulaano iyo dagaalo isku lidi ah hadii ay xiisadu kasii darto hasa yeeshee Somaliland ayaa helaysa fursad qaali ah maadaama aysan jirin iska caabin kala hortagaysa ciidamadeeda.
Somaliland ayaa hadii ay qabsato deegaanada Faliidh Yaale iyo God Qaboobe ku dhiiran karta gaadhista deegaanka Yoocada oo ay aaminsan tahay in uu ku eg yahay xuduudkeedu, taas oo Puntland dhab jab ku noqon karta maadaama marar badan ay ku guul daraysatay soo celinta deegaanada maqan ee Sool iyo Sanaag.
Khilaafka Denni iyo Axmed Karaash ayaa sii xoogaysigiisu fursad u noqon karaa Somaliland iyo kooxaha sharwadayaasha ee Daacish iyo Al-shabaab maadaama awoodii dowladda ay kusoo koobeen is qabsi iyo xiisad sababi karta dagaal ka dhaca gudaha Garowe xili aysan jirin isku tanaasul dhex yaala labada hogaamiye.
Abdirazak Abdirazak says:
Ninka qora boggaan Puntlandtimes waa nin aad u neceb Puntland iyo dadkeeda. Waxaan u maleynayaa in uu ninkaan yahay leelkase waayo iyaga buu ku jiraa naceebka heerkaas ah.
Somaliland waan ku soo dhoweyneynaa in ay timaado xuduudkeeda Yoocada, Karashna hal xabad kama dhex ridokaro Garowe. Waxaa intaas dheer tuulada Gal-dogob waxaan ku dareynaa Galmudug.
Viva Majeerteenya Allah baan u baahanahay cid kale uma baahnin.
Ninku runbuu sheegee maxaad la muraraara dilaacday dhibmale hadii somaliland timaado yoocada idinkana waydunku cararka angana waanugu baacsiga caasimadduun baad boosaso ula guureysaan garoowana somalind baa dusha ka maamuleysa sida laascanood
Waxaad u hadal egtahay midaan adduun iyo aakhiro midna war ka hayn.Mid maqlay wax unbaa la sheegaa.Mid golahaan ku soo dhex ku fay oo an la qabsan karin arimaha looga doodayo.Ugu dambayn soo baro sida saxdaa ee loo qoro your mother’s native language.
War mid neceb reer puntlaan iyo midaan nebcayn midna wax ka qaadi mahayo ee iska iloow nac-nacda Mooryaan-Huutuuga.Haddaad aragtid ama maqashid mid wax neceb waa miskiin itaal waayey oo daciifa.Qof wax isku hayaa qof asaagiis ah ma neceb caado ee ficil buu la hortagaa.Reer puntlaan horaa xaasidnimo wax looga qaadi waayey ee wakhti ha isaga lumin.Xamar iyo Hargeeysa intay jireen puntlaan bay ku soo qaadayeen dagaalo ay isla og yahiin waxaan dhib ahayna kama ay helin.
Abdi kaga Dar says:
Hadaad argtid Qof leh,
Qof baa Qabiil neceb waa daciif liita.
Warkaan qofka qoray ayaa jeebkiisa kala soo baxay!😷😷😷
Intii uu nacaybkiu kabatay ayey hadda sheekadoodu waxay gaadhey sidii doqonkii yiri ” WAXBA DHOWRSAN MAYNEE ALLOW DHAGAXYO SOO DAADI” Doqon xaasidah ayaa qora waxuuna kujiraa xaaladdii ahayd XAASIDNIMADU WAXAY U’GUBTAA QOFKA SIDA QORI DAB LABADA DHINAC KASHIDAN. Maxaa kaharaaya? Gun waxa yareeyey waa xaasidnimo. Marrexaan, Dhulbahante, Leelkase iwm waa taran yaraadeen ama tayadaa katagtay. Look at them, how horrible they lost every aspect of life.
Maamulkii Yaraa Ee Maxamud saleebaanku ku Dawarsan Jiray waa burburay Walaal.
Hadaba Waxaay U Egtahay In Madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Laandheeraha Geeska Africa Uu Si Fiican U Tukhaan Tukhin Doono Laangaabiinta Majeerteen Ee Cuqdadaysan.
Viva NABAD IYO NOLOL
VIVA Mahad Cambaashe Cilmi
Ciidamada Dhulka Ee Beelwaynta Dhulbahante
Marka hore waxaad leedahay hadal iyo caqli Mooryaan.Marka labaad intaan arkayey qoraaladaada saasaad u dabo taagneeyd M.Sulaymaan.Calaa kulli xaal Muxammuud Sulaymaan puntlaan gaar uma leh oo waa meel ay wada leeyahiin soomaalida degta ardiga uu maamulo maamulka puntlaan.si kale haddii loo dhigana waa WAAJIB in ay Muxammuud Sulaymaan u bataan gacan ku haynta maamulka sare.Waayo ayagaa inta badan difaaca puntlaan oo ay wiilashooda iyo aabayashood u dhintaan.Dad an ogolayn in ay wiilashooda u diraan furunta hore see bay ula sinmahayaan kuwo ay wiilashoodii ku naf waayeen?Waligiis qofka cuqdada qabiil qabaa sidaada oo kale waxuu ku ag wareegaa reer hebal baa saas iyo saas ah.War M.Sulaymaan maxaad ka qaadi kartaa,illaa xaalkaagu waa (dhagax taabasho iyo tuujin waa isaga mid).Waligaa haddaad qaylinaysid yaaba dareemaya in aad jiritdba.
** CIID MUBAARAK DHAMMAAN AKHYAARTA DURRIYADDA DAAROOD **
@ Ugaas Xade
@ Caqqil Cabdiweli
Iyo guud ahaan inta kale ee meeshan martida ku ah.
KULLU CAAMIN WA ANTUM BIKHEYR.
Jama qardhaawi says:
Puntland nin bay gacantiisa ku burburay sharci ahaan , hanaaan dawladeed ahaan wana qabiilayste ururka arxan lawayaasha aaran Jaan ee kana xagjirsan Daacish iyo shabab ee kamacaasha dhiiga shacabka
Dawladninadiina u isticmaalay ENG iyo maqaar ay ku maalaan hantida ummada
Kuna cunaqabateyan shacabka
Khayraadka wadankana ku ibsadaan dekado macaadin iyo duurjoogba
Qabiil kuma nicin oo cid ban isu xignaa ee dadka ayaan la dan ahay dawladnimo bana na deqda
Horta meeshani ciyaal ma joogaan ee akhyaar uu maankoodu dhan yahay ayaa ku soo hirta. Adigu waxaad tahay guulwadaha Cali Bile iyo khaatumo-beelkii uu Dhulbahantaha Soomaalida kale kaga reebay. Maxamuud Saleebaan iyo Majeerteen qalad kasta oo ay galeen deegaankooda ayay ku sugan yihiin oo ay dhib iyo dheef ba kaga guran doonaan.
“Somaliland” in aanay jirin waa laga wada dheregsan yahay oo “ciidamada” mediaha lagu buunbuuninayo waa iska maleeshiyo beeleedyo la tuuteeyay sida kuwa Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale ka jira. Dhulbahante fadeexadihii hore ee uu caalamku kula yaabbanaa waxay maanta ku sii darsadeen dugaagnimadii ugu xumayd waayo Majeerteenka sida la arkay ugu roonaa oo wax walba u hurayay ayay u xiniinyo weynaadeen iyaga oo ah la haysteyaal hooygooda lagu dhex gumeysanayo oo lagu bahdilayo.
Khilaafkani waa mid dhammaan doona ee caliyadiina ceshta oo naga la dul dhaqaaqa khara ee! Khilaafkan isna wax yar baan ka sii dhihi doonaa.
Waan idin salaamay dadka jiran ee Web. Puntlandtimes wax ku qora
Adeer anagaa somalilanders ah ….wax dagaal ah oo aan soo qaadayno ma jiraan ee dadkiina beenta ka daa
Sidii aan marar iyo meelo badan oo hore ku soo tibaaxay Puntland qaddiyad hoggaamineed ee ay beelaha ku bahoobay himileystaan oo una hoggaansamaan ayaa weli ka maqan. Dadka qaddiyad u wada muqaddas ah ayaa mideysa oo uu hankoodu u wada hanqal taagaa. Waddaninimada Soomaaliya ka sokoow mid geyi ahaaneed baa mar kasta loo baahan yahay oo xisaabta ka maqan.
Sida aan hubo in marxaladdan la isku simo aad ayay u muhiimsanayd maadaama in dhawaale ay beelaha geyigan Puntland wadaagaayi kibirku ka indhasaabay fadliga iyo nimcooyinka ay dagal iyo tol ahaan ku sugnaayeen intii uu dalku burbursanaa. Dad kasta markay ay dhiida gaadho ayay ku hambabaraan waxa ay nacasnimada qaadday ka khasaarin rabto oo khassab kaga yeesha in ay dib u xisaabtamaan.
Puntland waxaa teer iyo 2007dii dhabaq xun ku keenay beesha Dhulbahante oo in muddo ahayd isgoys baa la barriiqnaa. Aminkii waxaa la joogaa uu geeddigu ama dhan u wada guuri lahaa ama se kala guuri lahaa. Deni waa macanggag iyo nacas ba oo way ka muuqataa, laakiin oohintu orggiga ka weyn. Go’aan kama dambeysa ah halka ay waddaniyaddoodu taallo waa in Dhulbahantaha culays weyn laga saaro marka xiisaddan la xallinayo. Yacyacooddii hore ma sii socon karto haddii tolnimada iyo loo daneynayo mustaqbalka Puntland. Maxaa ila xal ah?
In ay issimada tolweynaha kale ee Puntland issimada Dhulbahante la yeeshaan wada xaajood kama dambeys ah ee bayaan loogu kala baxayo waddaniyadda beesha Dhulbahante. Waa in lagu laazimo in ay toos afkooda ugu qeexaan dhanka ay isku tirinayaan iyo in ay Puntland ka sii mid ahaanayaan iyo in kale. Waa in deeto mediaha hortooda ay ka caddeeyaan go’aanka beeshu waxa uu noqday. Ama gumeysiga iidoor ha u go’een oo ha loo daayo, ama Puntland si xasarad la’aan ah rasmi ha uga tirsanaadeen, ama haddii kale Xamar ha iska sugeen oo rabshaddooda iyo ragaadkooda Puntland ha kala baxeen. Wax u dhexeeyaa ma jiraan.
Puntland In Ay Burburay Oo Lagu Kala Yaaco Ayey Danta Dhulbahante Ku Jirta.
Sababtoo Ah Puntland Waa Mashruuc Ay Ku Dawarsadaan Beesha Yar Ee Majeerteen Sidaa Awadeed Waa In La Idinka Tuuraa Daasadaas Bil Xaqiiq.
Fardojaanoow xaqiiqooyin dhab ah ayaa runtii aad kuu seeggan. Waa tan hore ee beelaha ismaamulka Puntland ku bahoobay dhiig iyo dhalasho ayaa meeshan ku kulmisay. Waa tan labaad ee dagal iyo duruufo ay ku wadaagaan baa is baday. Waa tan saddexaad ee ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ayay maamul guud iskugu baheysteen.
Haddaba, haddii aydun Dhulbahantoow idinku ismaamulkii la wada yagleeshay ku qanci waydeen maxaa colaadda iyo burburka keenay iyada oo qun yar habkii markii hore ba wax la iskugu darsaday dib loogu kala bixi karo? Maxaa dan ah oo adiga Dhulbahante ahaan kuugu jira in aad tolkaaga kale ee aad dagalka kula nooshahay dhiig kala gashaan? Iyada oo aanu dhiig sokeeye daadanin sow si tartiib ah siyaasadda loogu ma kala bixi karo?
Anagu haddii aynu Majeerteen nahay diyaar baynu u nahay in ay Dhulbahantuhu goonidooda u baxaan laakiin Dhulbahantaha ayaa laga la’ yahay go’aankaas raganimada leh. Anagu da’da naga yar kuma saqajaamayno ee adigu bal daaraha naga dummi oo na doox doox oo deeto arag darajada kaaga soo korodha iyo wanaagga aad ka dheefi doonto.
Haddii an kuula hadlo saad u hadashay beesha yar ee Majeerteen adigaa MARTI iyo MAGANBA u ah.Adigaa shaxaad iyo war bal maanta ii qaad la ag fadhiya.Adigaa ah midaan maarayn karin naftiisa in uu dad kale u ag fariisto ma ahee.Waa adiga kaan la hayn deegaan uu ku hoydo.Waa adiga kaan ku kalsoonayn naftiisa iyo dadkiisa.Waa adiga kan Majeerteen gacmaha u hoorsadaa.Waa adiga kan dhulkiisii ay asaagiis ka sareen.Miskiin yahoow Majeerteen dhul kama maqna ee waa adiga kan ku jira seeg-seega oo la’ meeluu jaan iyo cirib dhigo.Waa adiga kay Isaaq ku maadaystaan oo marna u tuuraan dhawr marduufoo CAYS ah marna gogosha u firaasha.Mjeerteen waxuu rabay in uu kaa saaro dulinimada ad ogolaatay waadna la garan weyday miskiin ahoow jiran.Maadaama majeereteen maaro kaa waayey oo la af garan la yahay waxaad rabtid iyo meeshaad ku socotid maantaa lagu siidaynayaa ee isdabir nin baa Rabbi ka dhigaye.Run ahaan cidaan Majeerteen ahaynu kuma ahyn karto dhawr bilood.Waayo afka in wax laguu galiyo ma ahee gacmaha ma fidnaysid.
Qofkaan la hadlayaa waa miskiinka la haysto ee an ogeeyn in la haysto ee Fardojaan.
Kama hadlin beesha sharafta leh ee fardojaan
Su’aal Yar Kaliya Iga Jawaab!
Waa Maxay Sababta Mar kasta Oo Aan Is Dilayno Iidoor Wagaashe Madaxda Majeerteen Ex Puntland Dhulbahante Ugu Tilmaaman Argagixiso.
Maxaay Tahay Colaada Intaas Le’eg Ee Aad U Haysaan Dhulbahante
Saaxiib iidoor idinku is ma dishaan ee iyaga ayaa idin dila. Waydun ka carartaan oo ka baqdaan oo u niikisaan. Maanka iyo caqliga ayay idin ka haystaan. Taasu waa marag ma doonto oo caalamka oo dhan baa ka war qaba.
Doqon baad tahay haddii aad kala garan wayday oo kala saari kari wayday siyaasi uu mar keli ah hadal aan munaasab ahayn ka soo fakaday iyo bulshada uu ka dhashay ee aan dembiyadiisa iyo eedihiisa la wadaagin.
Intii aflagaaddo ahayd ee ay adeerradaa labo Cali iyo Garaadkiina Jaamac beelweynta Majeerteen ku soo ganeen miyaa mar na la idiin qabsaday? Miyaa goggol la idiin ku dhigtay? Miyaa beel ahaan la idin ku colaadiyay? Waa maya.
Jawaabtaasu way ku deeqdaa baan filayaa.
Abdirizak Abdirizak, ninka websitekan qora waxaa la yiraahdaa Faarax Geylan, mana aha nin qarsoon. anigu maqaan shakksiyan laakiin markaan daawaday videoskiisa ku jira Youtube iyo markaan akhriyo qoraalladiisa, wuxuu iila egyahay reer Sool&Cayn amase Sanaag Bari. Qofka indhaha la’ amase dhegaha la’ xitaa taas wuu fahmi karaa. Marka, dad uusan ka dhalan, waxna la wadaagin waxba dusha ha uga saarin. Haddii cid xumaan iyo cuqdad ku jirto, adigay ku jirtaa. Waxaad tahay sida ninkii catirta bililiqaystay ee yiri,’rag isgurayee!’.
@Boodhari, maalinkii dhoweyd ee la yiri Karaash baa ciidamo keenay duleedka Garowe waad dabbaaldegtay. Taasi waxay tustay xaqiiqdaada iyo halka aad kasoo jeeddo. Qoraalladaada waxay ku salaysan yihiin dhaliil aan meel la taabto lahayn oo maldahan oo dantoodu tahay kicin reer Sool& Cayn iyo Sanaag Bari. Mar kasta waxaad tiraahdaa waa in dadkii Puntland wada dhistay wadahadlaan laakiin ma tilmaantid wax qeexan oo laga wadahadlo.
Majeerteen ma tihif, lahjadoodna malihid. Xitaa hadii islaan reer Somaliland ku dhashay, ma lihid ruuxiyad, caadifad, fekar iyo qaddiyad Daarood, iskaba daa mid Majeerteen.
Sida rag hore sheegeen, waxaad tahay naara-afuuf, munaafaq, jirjirroole, fulay, iyo tobantolle ujeeddo gaar ah u qarsoon tahay.
Waa marka hore ee waad ku mahadsan tahay sidaas aad dhiiqada iskugu camcamisay waayo aniga waxba ii maad dhimin adiga ayaa is ceebeeyay. Wa marka labaad ee anigu Ramadhaan aakhirkeedii baan hawada ka baxay oo aan akhyaarta sharafta leh ku macasalaameeyay. Waan isleeyahay kii iidoor ee igu khafiifay ayaa inta uu magacayga isku soo qariyay meeshan kaga caytamay intii aan ka maqnaa. Haddii ay sidaas tahay oo aad na kala garan kari wayday waa dowgaa maandhe.
Waa marka saddexaad ee aniga xaggayga runtii ragga meeshan wax ku soo darsada dhowrka aadka u kooban ee aan ka akhristo oo ka dhegeysto ayaad ku jirtaa run ahaantii. Laakiin maqaamkii aad ila joogtay hoos baad iskaga ridday mar haddii aad ruux aydaan aqoon isu lahayn ku dhiiratay in uusan qabiil hebel ahayn. Mar baan waxaan kuu maleeyay kii iidoor ee iga daba waashay oo magacaaga soo isku soo raray. In aad cilmul qeybka daalacatay waa dowgaa jaalle.
Anigu nin xor ah baan ahay oo afkaartiisa xorriyad taam ah iyo xaq buuxa u leh. Sharaftaydu ka weyn in aan dad aynaan is aqoonin mar ba cid aan ahay u sharraxo. Anigu ba isku ma hawliyo in aad dadka haybtooda fag fago ama faaqido. Maxaa idinka i kiin daba dhigay bal caqli xumadiina? Lahjadda Majeerteen waa tee bal inoo sharrax illayn fartayda iyo taadu waa kuwaa aan la kala garan karin ee? Lahjadda se miyaa loo dhashaa mise waa lagu dhashaa sideeda ba?
Waxaa kale oo aad igu soo wiiqday:
“Sida rag hore sheegeen, waxaad tahay naara-afuuf, munaafaq, jirjirroole, fulay, iyo tobantolle ujeeddo gaar ah u qarsoon tahay.”
Ma inoo sheegi kartaa ujeeddada aniga ii qarsoon oo caddeymaheeda akhyaarta ma la wadaagi kartaa? Waayo doodaha ilbaxnimada u saaxibka ah ee aqoon lihi daliilo cad ayuu u soo xigtaa dhaliilaha uu cid kale ku dhaleeceynayo. Miyaad haysaa?
War iskadaa warkiisa Mr.Boodhari.Magaciisa oo dhanna waan hayaa.Waa nin M.J. ah oo ka sii ah Warsangeli.Hooyadiisna waa Habar Yoonis.War iskadaa waxuu rabo ah sheegee.Waa runtaa oo marar badan buu la fuulaa Majeerteen.Dan looma galo ee iskadaa.Ugu dambayn ninku waa professor saaqiday oo busaaradaysan.Waa xayraan ee ka bayr hortiisa yuusan ku marine.Waxuu ahaan jirey professor xariifa ee mar dhexdaasa baa wax ka qaldameen.Allaah (swt) ha caafimaadiyo.
Saaxiib qadaf xun baad ii geysatay ee aanan kaa muteysan oo kaa mudnayn xaqiiqdii. Hawada ayaynu muddo dheer isku naqiinnay oo anigu abid meel kugu ma xamanin oo kuugu ma geffin oo xataa kuma soo hadal qaado runtii.
Rag waaweyn baynu nahay ee aynu kala xishoonno fadlan. Anigu nin xor ah baan ahay oo in aan cid u abtirsado kuma khasbani. Tolnimadaas iyo Islaamnimada inaga dhexeeya yaynaan isu soo dhaafin. Adigu cid aad Soomaali ka tahay ma hubo oo adigu na cid aan ka ahay i ma hubtid. Sidii aynu isku barannay ha inoo ahaato haddii aad wax xeerinayso.
Halka aniga tolkeena Warsangali ii damqatay maxaa adiga kaa naafeeyay oo aad iigu garab istaagi wayday saddexdaas sano ee aan SNM-ta weerarka ku hayay? Miyaad waligaa isku la xisaabtantay inta aad tolkaaga nacabka marba u jabinayso?
Ugu dambeyntii, odaygaa iidoor ee igu daba khafiifay waa mid aan si xun u soo ciilay oo nabarro uu ka soo kaban la’yahay in muddo ahayd ugu geystay website-ka Marqaan loo yaqaanno. Col daahii go’ay ayaynu isaga nahay maadaama aan qaddiyaddoodii xaqdarada ku dhisnayd bartaas kaga takhalusay isaga oo iyo labo kale oo markii dambe daaqadda ka baxay.
In aad isaga is xigsiiso oo aad aniga qoriga igu soo duwdo runtii adiga ayay ceeb xun kugu tahay. Halganka maan-ka-dirirka iyo fadhi-ku-dirirka waxaa ku fashilma ninka nacabkiisa iyo gacalkiisa kala garan kari waaya ee sidaas u la soco. Baabka “espionage-ka” ama sirddoonnimada isna wax ka soo baro, haddii aad wax taqaanno iska qiyaas oo garo halka uu odaygas SNM ka gubanayo oo uu iga soo weyraxayo. Waa iga talo.
Boodhari saaxiib, aniguna runtii ragga aan maqaalladooda xiiseeyo baa tahay, laakiin maalinkii dhoweyd ee kuwo badan mashaxaradeen ee ay isyiraahdeen Puntland waa lagu kalatagay ayaan — haddii aanan khaldanayn– waxaan qoraalkaaga ka dareemay hadal loo tarjuman karay ‘puntland waa u dhammaatay oo waa burbursaysaa’, marka taas ayaa dareen i galisay. Maqaalkaagii aad fasaxa Ciidda ku gashay waa akhriyey.
Tan kale, qoraalkaaga Af Soomaaligu wuu ka duwan yahay kan reer Mudug, Nugaal iyo Bari, wuxuu xigaa dhanka Sool iyo wixii kasii shisheeya, taas ayaana shaki isii galisay. Waa ogahay qofku inuu meel kale kusoo kori karo amase hooyadiis mandiqad kale kasoo jeedi karto. Sidoo kale username-kaaga (Boodhari) ayaa isa dareen i galiyey.
Marka, xaal qaado; cimaamad baan ku saaray. Labadeennuba isku meel baynu wax u wadanaa waxaase dhici karta inaan isticmaalno different approaches. Wixii ina dhexmaray kasoo qaad friendly fire.
Way dhici kartaa inaad tahay nin Majeerteen ah oo ah independent minded, waanan kugu ixtiraamayaa.
Anigu waan ogahay wax walba oo Puntland ka jira. Waxaana sabab u ah dabeecadda iyo dhaqanka qabaliga ah ee Soomaalida. Waxayse ila tahay in xilligan adag la muujiyo sabar iyo dulqaad. Waan hubaa inay maalin ay noqotaba ay Puntland yeelan doonto elite ka koray danaystenimo iyo reer jeclaysi.
Aad baan kaaga mahadinayaa xaal marintaada qiimaha iyo qaayaha badan xambaarsan ee aad hawada ii soo marisay. Si kal iyo lab ah ayaan kaaga guddoomay saaxiib oo waxaan adiga sidaas si la mid ah kaaga raalli galinayaa waxii aad ku qoonsatay canaantaydaas dheer.
Waxaan dhaar Alle saddexdiisa magac ah ku marayaa in aanan anigu qorin hadalladaas shakiga idin ku abuuray oo aanu iga suuroobin haba yaraato ee. Ma nin xiskiisu taam yahay baa tolkiisa iyo dhulkiisa sidaas u habaari lahaa nacuudhu billaahi ee? Odaygaas iidoor ee magacyada badan isku soo qariya weeye kan namiimnimadaas ku dhaqma ee dembigaas xambaarsan runtii oo waa na qasadka uu ka lahaa.
Nin aqoonyahan ah baad tahay oo dabcan waad garanaysaa in lahjadda badanaa ba lagu dhasho ee aanay khassab ahayn in loo dhasho. Sidaas oo kale ina adeer Daaroodka badankoodu waxay la lahjad yihiin qabiilladaas Woqooyiga iyo Galbeedka ay oodwadaagta kula yihiin. Absamaha, Dhulbahantaha, Warsangali Galbeed, Geri Koobe iyo inta la deegaanka ah waa isku lahjaddaas “woqooyiga” loo yaqaanno. Haddee kan Majeerteen mise Mareexaan ee tolkiisaas kale ku dhex dhashay lahjaddaas ayuu ku hadlayaa. Muhiimaddu waa qaddiyadda uu qofku daaddihinayo iyo in uu tolkiisa difaac adag ugu jiro waayo nin iidoor mise Hawiye ahi kama suurowdo in uu Daaroodka wanaag ka sheego iska daa in uu qaddiyaddooda duuliyo ee.
Gacaltooyo wacan Araroow oo odaygaas SNM ah aad uga foojignaada. Waa diradiraale namiimnimada ku xeeldheer oo been qayaxanna dhaar cad ku mara.
Alla maxaa munaafaq oo dhami jecel yahay inuu is difaaco oo wax deedafeeyo. Been been lagu saxayo iga dheh.
Akhyaareey NINKAN BOODHARI isula baxay waa magacyo badane iyo beenaale kaadib ah. Munaafaq aanan biyo is marin oon Illaahay aqoon.
Haduu Illaahay garanayo 3 Sanadood Marqaan media inuu Warsangeli yahay kagama uu dhaarteen. Ciidaas ka farabadan intuu Warsangeli Baan ahay ku dhaartey. Sadex sanoo ku dhan ayuu dhaartaas marayay.
Magacyadiisa waxa ka mid ah Cismaan Cawad oon ku bartey. Wuxuu kusoo geli jirey, Cismaan marmarka qaarkood. Dabadeedna magacyo badan oo kale ayuu isku raray, sida Taajka Maakhir iyo Cismaan Basbaas. Prince something…. Waa intaan ka xusuustee. Sadex sanadood dabadeed markaanu siyaasad walba oo uu ka sineyso is yidhaa ku qabaney ayuu isku kaaya dhalan rogay. Boodhari la baxay. Majeerteena sheegtey. Bal adba. Hada waa ninkaanu Warsangeliga u naqaanay.
Atoore ayaa garanaya ee bal faah faahi isaga ku yidhaahda.
Warsan geli Baan ahay. Habar Yoonis baa I dhashay. Abtiyaal, Inabtidaas buu na guri jirey. Maalina dacartaa ku kici jirtey oo Isaaq buu habaari jirey. Maalina calaacal buu ku barooran jirey. Maalin maalinta uu yara degen yahayna amaan buu nagala dul dhici jirey.
Laakiinse labada mareegtaba mid buu ka siman yahay.
Qoraaladiisa bal u fiirsada. Wey qurxoon yihiin oo si wanaagsan buu Af Soomaaliga iyo Ingiriisigaba u higaadiyaa, laakiinse waa wada humaag iyo muuq aan dhameystirney. Wax qodoba ah badanaa ma wataan. Ma dhameystirna. Inta jeer ee uu fikrad soo dhigo ama dood soo qaato ee hadana uu wax details ah aanan laheyn garan kari meysaan.
Wuuna is rogrogaa. Maalina beelaha ayuu toos u caayi, maalina isla beeshii caayay Shaley ama doraad ayuu amaani ama difaaci. Hadaad la doodo wuu ku masabidi. Wuxuu imika lahaa ayuu dafiri. Kun jeer ayuu isku kaa dhalan rogi. Beelaha uu aadka u caayo kow waa Isaaq, waxa kusoo xiga Hawoyaha, waxa sadexeeya Dhulbahantaha. Sadexdaas beelood wuu ku tasbiixsadaa.
Calaa kuli xaal. Cismaanoow, aniga waxba ha igu xoqxoqnin. Qoraaladeyda ayaaba aanan saas usii badneyn. Anoo kolkii horeba kuu arkayay qof Qabiil dhaansadey oo cuqdadi dhaamisay oo xitaa garan la’aa waxa ay Isaaq kugu sameeyeen ee Illaa iyo heerka waalida ku gaadhsiiyay ayaad khaa’inimo, been iyo munaafaqad ku darsatey.
Sharafna waxaa kuugu danbeysay maalintad tidhi Warsangeli ma ihi ee Majeerteenbaan ahay. Eed qiratey inaad 3 Sano iyo dheeraad nagu khiyaaneyneysay Marqaan media. Eed weliba ku faantey. Kkkkk
Ma been baan ku dhaartey ayaa lagu faanaa. Istaaqfurulaah. Waa wax laga duceysto beentu. Waana laga khajilaa sheegashadeeda xitaa hadey kaasoo fakato. Dib danbeysana looguma noqdo. Waana laga toobad keenaa.
Waxaan ku heyn lahaa xushmad iyo qadarin hadaad Qabiilkaaga dhabta ah intaad iska iimaansato sidaad doonto u doodid. Ama Warsangeli difaac ama Dhulbahante ama Ogaadeen amaba Hawiyeba ka dhahoo.
Laakiinse waad isku xaartey.
Xaqiiqadase anigu waxaan is leeyahay kolkaan si walba u fikirey oon u rogrogey inaad imika been sheegeyso oonad Majeerteen aheyn. Warsangelinimadana aad kaga carareyso, waji gabax iyo difaac aad u weydey kolkaanu kugu nidhi Budhleyn waxba kama tihidiin. Dhoobo Daareed had cad ayaa laga takhalusay iyadoo uu weli dareerayo dhiigii inamadiina xarunta Baarlamaanka Budhleyn. Puntlandnimadii aad ku go’eysay oo aad nigis ka noqoteen. Gudoonkiinii Baarlamaanka oo kana siib kana gasho laga dhigtey ooydaan juuqba ka odhan Karin. Kolkaad u dulqaadan weydey duqeymahaas aan kuu miisayay ayaad Qabiilkaagii ka carartey. Kkkkk
Waxaad ka dhigan tahay imika Dacawadii magaceeda ka tagtey, kii nebigana gaadhi weydey. Warsangeligaagiina waad ka carartay Majeerteena weligaa noqon meysid. Kkkkk
Ma joogtid lee ayay wakaweyntu tidhaa. Kkkk
Ahmed Dabacayuunoow, maandhe qaddarin iyo xushmad toona anigu kaaga ma baahni ee adigu danahaaga garo oo raac inta aad aniga raadkayga meel kasta ka urinayso. Saddexdaas sano karbaashkii aan idin kala daalay dadku waa ogaa. Doqon aan abidkii kabban in aad tahay waxaa laga dheehan karaa in aad Majeerteen iyo Warsangali u kala lafa gurayso sida aad mooddo in ay Yahuud iyo Shiinays kala yihiin. Warsangali waa Majeerteen oo Majeerteen waa Warsangali. yaan bahasha lagaa garanin.
Midda labaad ee aad doqon ku tahay waxaa weeye jahliga xun ee kaa haystay shaxda maan-ka-dirirka iyo fadhi-ku-dirirka iyo waliba xariifnimada iyo astaamaha barabagaanka nacabkaaga loogu adeegsado. Intaas oo dhan baan kaaga raayay oo uu faraskaygu kaaga dheerayn jiray. Sow qaddiyadda Daaroodnimo iyo Puntlandnimo ma aysan ahayn waxa aan intaas duulinaayay ee aad ka xajiimoon jirtay? Ma qaddiyad kale ayaan u halgamayay bal noo sheeg? Fariidnimo haddii ay agtaada martay waad dhaadi lahayd in magacyada astaamaha loo adeegsado qasadka loo la jeedo sida:
Taajka Maakhir = Warsangali
Prince of Maakhir = Warsangali
Calaa kulli xaal, meeshan ama aragtiyadaada si sharaf leh uga dhiibo akhyaarta kale sidooda, ama haddii kale aniga iga daba yuus habar hinaastay sideeda ilaa ay nafta yari kaa dhacdo illayn ceeb loo ma dhinto ee. War yaa Ilaahay yaqaan!
MURTI NIMAAN GUNTEEDIYO
BARAN GOGGOL DHIGGEEDOO
GONDA DEGI AQOONOO
GARAB DAAR LAHAYN BAA
GOWL GOWLA HADALKOO
KOLBA DHINAC GAROOCDA
Walee @Boodhari waa geesi geesi dhalayee iska dhaafa. Waa aqoon yahan waana aftahan. Waa ku qoslay siduu xuunshada isaga wada buufiyey kkkkkk kkkk. War boodhariyow dadkaan waa kaa saseenee afkooda ilaahey hakaa xijjaabo. Qulwalaha badso sxb.
Munaafaqow weli beentaad ku dhaaratay ayaad ku faaneysaa! Yaab. Waar anagaa wax aragnay.
Sadex Sano ayaad leedahay been baan ku dhaaranayay ood weliba ku garameysaa! Cajiib.
Warsangeli iyo Majeerteen waa Harti Waana isku bah. Taas cidi daah kama saarna. Dab La Rideyba isagoo Warsangeli ah ayuu Majeerteen iyo Daaroodba duulin jirey sharafna ku lahaa. Atoore isagoo Majeerteen ah ayuu Warsangeli iyo Daaroodba difaacaa hadh iyo habeen. Sidaasna Sharaf ku leeyahay. Adiga maxaa kugu kalifey inaad been ku dhaarato ood Qabiilkaaga ka cararto? Weliba Munaafawnimo aad ku faanto? Amakaag.
Fadhi ku dirir iyo dagaal maskaxeed iyo sidii dhoocil u hadalku ma waxey dadka u horsedaa iney been ku dhaartaan oo Qabiilo aaney aheyn sheegtaan? Fajacnaa.
Munaafaq aan biyo is marin baad tahay.
Bal yaa kale oo halkan hadh iyo habeen sidii dhoocilaha u hadla oo qof walba la tirsada oon adiga aheyn? Yaa kale oo ka dhamaan waaya qofbaa magac kale soo qaatey oo dadka isku namiima oon adiga aheyn? Yaase kaa magacyo badan?
Bernina DEDIG Baan ahay oo Xaawaley ayaan ahay ayuunbaanu kaa sugeynaa.
Saadanbena Daanyeer ayaan ahay oo dadba ma ihi ayaynu kaa filan doonaa. Daanyeer keyboarka si wax loogu qoro bartey. Kkkkk
Daanyeerkii Daaroodka is Moodey. Kkkkkk
Munaafaq. Beenaale. Hadal adiga kuuma yaal ee wajigaaga ka qari.
Adna ma niikisbaad bilawday? Naago niikiya ayaanu arki jirney ee waa maxay Nin Nin kale u niikinayaa. Waar bahasha nagala hor dhaqaaq foolxumadeeda.
Ina adeer hadda ayaan arkay difaaca gacaltooyo ee aad ii gashay iyo ducadaada qiimaha badan ee aad ii raacisay. Waa runtaa oo beladan Eebbe sharkooda ha inaga wada hayo afkoodii baa nagu batay ee. Aamiin.
Waa wax magarato ee ha u bixin iyaga iskood u daali doona ee.
@@@ Suldaan Boodhari & Cabdiweli & A.Arar iyo akhyaarta oo dhami waan idin Salaamay.
Saaxiib arrinta aad Boodhari u saarisay isaga ma ahayn oo anaa caddeeynaya.
Sababtoo ah, Boodhari fariin ka horreeysay qoraalka magaciisa lagu soo galay ee aay dad badan isaga u qaateen.
Haddii uu qofkiin dib u xasuusto, waxaan maalinkaa qofkaa ku iri. Boodhari ma ahide ninkaa magaciisa u dhig oo haddii aad Puntland neceb tahay, magacaagu wax kaga sheeg.
Wuxuu ahaa, qof og in uu Boodhari na mac salaameeyey oo idinka dhex kaluumeeysanaya.
Waxaan ka codsan lahaa Puntlandtimes, dadka caaytamo iyo kuwa magaca qof kale wasaqeeynaya waad aragtaane in aad xakameeysaan.
Sundaan soo noqosho wacan.
Salaan gobeed Ugaas oo waan dhowahay shukran jaziilan. Markhaatiga aad ii noqotay Alle waxaan kaaga baryayaa in uu kheyr aan caddad iyo qiyaas lahayn kaa sawaabiyo.
Ugaasoow, akhyaarnimadu waa u dhalasho ee ma aha iska yeel yeel wallee. Ahlu iimaanka nasabka ah sidaada khusladaha lagu garto waxaa ka mid ah in aanay xaqa iyo runta eex iyo xagal daac ba ku dakhrin oo ayna hab ilbaxnimo lagu suntay hawraar milgo leh dadka kale u la wadaagaan.